डा.चन्द्र भण्डारी: मेरो देशको प्रजातन्त्र लुटतन्त्र भैसक्यो
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. चन्द्र भण्डारीले नेपालको राजनीति मरिसकेको अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै अहिले युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याएर ईन्जेक्सन लगाएको जस्तो भएको सुनाए ।
पुस २०, २०७८ १:२५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. चन्द्र भण्डारीले नेपालको राजनीति मरिसकेको अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै अहिले युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याएर ईन्जेक्सन लगाएको जस्तो भएको सुनाए ।
उनले आफूहरुले पराजित भएर पनि युवा वर्गलाई नेतृत्वमा ल्याएको दाबी गरे । उनले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको दुःखेसो पोखे । उनले ठूलो ओहोदामा बसेकाहरुमा देशप्रति माया नभएको पनि टिप्पणी गरे ।
उनले कानूनले काम नगरेको कारण आज भ्रष्टाचार मौलाएको सुनाए । उनले देशको प्रजातन्त्र लुटतन्त्र भैसकेको पनि आरोप लगाए। उनले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको दुःखेसो पोखे । उनले ठूलो ओहोदामा बसेकाहरुमा देशप्रति माया नभएको पनि टिप्पणी गरे ।